Global Aawaj | घट्यो सुनको मूल्य आजको मूल्य कती ? घट्यो सुनको मूल्य आजको मूल्य कती ?
घट्यो सुनको मूल्य आजको मूल्य कती ?
१२ फाल्गुन २०७७ 11:59 am
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा रु ३०० ले ओरालो लागेको छ । तोलामा नै रु एक हजार १०० ले मङ्गलबार उकालो लागेको सुन आज भने झिनो अङ्कका साथ ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन तोलामा रु ८९ हजार ८०० मा कारोवार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । छापावाला सुन मङ्गलबार तोलामा रु ९० हजार १०० मा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन तोलामा रु ८९ हजार ३५० मा कारोवार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । तेजाबी सुन मङ्गलबार तोलामा रु ८९ हजार ६५० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै चाँदी आज तोलामा रु १५ ले घटेको छ ।रु एक हजार ३६० मा मङ्गलबार कारोवार भएको चाँदी आज भने रु एक हजार ३४५ मूल्य निर्धारण भएको छ ।
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
घट्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो तोलामा ?
सुनको मूल्य बढ्यो, आजको मूल्य कति ?